ခုလေးတင်ဝင်တဲ့ ဂြိုလ်ဆိုး သင်္ကန်းကျွန်းရဲ့ ရပ်ကျော်ရွာကျော် မိန်းမအကြောင်း အားလုံးသိစေရန် ဝေမျှပါတယ် – WunYan
ခုလေးတင်ဝင်တဲ့ ဂြိုလ်ဆိုး သင်္ကန်းကျွန်းရဲ့ ရပ်ကျော်ရွာကျော် မိန်းမအကြောင်း အားလုံးသိစေရန် ဝေမျှပါတယ်
သင်္ကန်းကျွန်း ကျိုက္ကဆံဘုရားလမ်း ရွှေနဂါးမုန့်ဆိုင် တွင် ထိုပုံပါ မိန်းမသည် ဆိုင်ထဲ အပြင် အိမ်ထဲထိ အတင့်ရဲစွာ ဝင်ရောက်ကာ ပိုက်ဆံတောင်းသည် ။
ပိုက်ဆံမပေး ပဲ နှင်လွှတ်လိုက်တော့ ဈေးဝယ်သူ ချထားသော ကိတ်မုန့်ဘူးကို ယူကာ ထွက်ပြေးသည်။ မုန့်ဘူး ကို ဆိုင်ပိုင်ရှင်မှ ပြန်လည်လုယူပီး ကျသင့်ငွေ တောင်းရာ မပေးဘဲ မုန့်ဘူးအားအတင်းပြန်လုယူသည်။ ဆိုင်ရှင်နှင့်အခြေအတင် ဖြစ်ရ်ျ အပေါ်ထပ်က ဦးလေးများဆင်းလာပီး မောင်းထုတ်သော်လဲ မသွားဘဲ ကန့်လန့်တိုက် ရူးချင်ဆောင်ပီး ညစ်ညမ်းစွာဆဲဆိုသည်။
အိမ်ကမွေးထားတဲ့ ခွေးလေးက လူစိမ်းကို ဟောင်တာကို တွေ့ရာ တုတ် နဲ့ ရိုက်လို့ အဖွားက မရိုက်နဲ့ အော်တာကို အဲ့မိန်းမက အဖွားကို ဆဲသည်။ ဦးလေးက နယ်ထိန်းဆီ ဖုန်းဆက်တယ် နယ်ထိနိးက သင်္ကန်းကျွန်းစခန်းဆက်ဖို့ လွှဲတယ် စခန်းကတဖန် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုလွှဲတယ် အုတ်ချုပ်ရေးမှူးက သူ့လူတယောက်လွှတ်ပေးတယ်.
(.ပြောချင်တာက အဲ့လိုတယောက်တယောက်လွှဲနေတာ အချိန်မဟားတရားကြံကြာစေပီး အဲ့မိန်းမထွက်ပြေးဖို့ အခွင့်အရေးပေးသလိုဖစ်တယ်ဆိုတာ…)
ဦးလေးတေရော အဒေါ်တေကော အင်အားများလာတော့ ဘေးဆိုင် one stop martကိုယ့်ဆိုင်ရှေ့က ရင်ကြည် မဟာရန်ကုန်ထဲဝင်ပီး ဝယ်သူတေကို ပိုက်ဆံ တောင်းသည်။ အတော်ကြာမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလွတ်တဲ့သူရောက်လာတယ်.. ဖမ်းခေါ်မယ်ထင်တာ မဖမ်းပဲ မောင်းထုတ်တယ်ထင်တာပဲ..ဟိုအရူးမ ကားလမ်းကူးပီးပြေးတာမြင်လိုက်တယ်…
ဘုရားလမ်းကနယ်ခံတေ အားလုံးသိထားပီးသားပါ အဲ့မိန်းမက ရူးချင်ယောင်ဆောင်တယ်ဆိုတာ.. အားလုံးက မသိချင်ယောင်ဆောင် လွှတ်ထားပေးလို့ခုလို အတင့်ရဲလာတာပါ..
ဆေးကဒ်ခွံတေကိုင်ပီး ဆေးဖိုးတောင်းပါတယ် ဖိနပ်ပြတ်ပြပီးပိုက်ဆံတောင်းပါတယ် မပေးရင် ကျိန်ဆဲပါတယ်…ကိုယ်တွေ့ပါနော်…
အရူးမက ပိုက်ဆံရှိပါတယ် တိုက်ခန်းပိုင်တယ်လို့လဲ ပြောကြပါတယ်.. သေချာတာက ငွေတိုးချေးစားပါတယ်…နောက်လမ်းထဲက ကုန်စုံဆိုင်တို့ ကွမ်းယာဆိုင်တို့က သူနဲ့ မကင်းဘူးလို့ ကြားရပါတယ်….
နောက်နောင် အဲ့မိန်းမတွေ့ရင် ဆင်ခြင်နိုင်အောင် ဒီ post ကိုတင်ပါတယ်.. အားလုံးကို သတိထားစေချင်ပါတယ်… အချောင်သမားတေကို ပိုက်ဆံမပေးဖို့လဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်….
Source : Hsu Sandi Shwe
ခုလေးတငျဝငျတဲ့ ဂွိုလျဆိုး သင်ျကနျးကြှနျးရဲ့ ရပျကြျောရှာကြျော မိနျးမအကွောငျး အားလုံးသိစရေနျ ဝမြှေပါတယျ
သင်ျကနျးကြှနျး ကြိုက်ကဆံဘုရားလမျး ရှနေဂါးမုနျ့ဆိုငျ တှငျ ထိုပုံပါ မိနျးမသညျ ဆိုငျထဲ အပွငျ အိမျထဲထိ အတငျ့ရဲစှာ ဝငျရောကျကာ ပိုကျဆံတောငျးသညျ ။
ပိုကျဆံမပေး ပဲ နှငျလှတျလိုကျတော့ ဈေးဝယျသူ ခထြားသော ကိတျမုနျ့ဘူးကို ယူကာ ထှကျပွေးသညျ။ မုနျ့ဘူး ကို ဆိုငျပိုငျရှငျမှ ပွနျလညျလုယူပီး ကသြငျ့ငှေ တောငျးရာ မပေးဘဲ မုနျ့ဘူးအားအတငျးပွနျလုယူသညျ။ ဆိုငျရှငျနှငျ့အခွအေတငျ ဖွဈရျြ အပျေါထပျက ဦးလေးမြားဆငျးလာပီး မောငျးထုတျသျောလဲ မသှားဘဲ ကနျ့လနျ့တိုကျ ရူးခငျြဆောငျပီး ညဈညမျးစှာဆဲဆိုသညျ။
အိမျကမှေးထားတဲ့ ခှေးလေးက လူစိမျးကို ဟောငျတာကို တှရေ့ာ တုတျ နဲ့ ရိုကျလို့ အဖှားက မရိုကျနဲ့ အျောတာကို အဲ့မိနျးမက အဖှားကို ဆဲသညျ။ ဦးလေးက နယျထိနျးဆီ ဖုနျးဆကျတယျ နယျထိနိးက သင်ျကနျးကြှနျးစခနျးဆကျဖို့ လှဲတယျ စခနျးကတဖနျ အုပျခြုပျရေးမှူးကိုလှဲတယျ အုတျခြုပျရေးမှူးက သူ့လူတယောကျလှတျပေးတယျ.
(.ပွောခငျြတာက အဲ့လိုတယောကျတယောကျလှဲနတော အခြိနျမဟားတရားကွံကွာစပေီး အဲ့မိနျးမထှကျပွေးဖို့ အခှငျ့အရေးပေးသလိုဖဈတယျဆိုတာ…)
ဦးလေးတရေော အဒျေါတကေော အငျအားမြားလာတော့ ဘေးဆိုငျ one stop martကိုယျ့ဆိုငျရှကေ့ ရငျကွညျ မဟာရနျကုနျထဲဝငျပီး ဝယျသူတကေို ပိုကျဆံ တောငျးသညျ။ အတျောကွာမှ အုပျခြုပျရေးမှူးလှတျတဲ့သူရောကျလာတယျ.. ဖမျးချေါမယျထငျတာ မဖမျးပဲ မောငျးထုတျတယျထငျတာပဲ..ဟိုအရူးမ ကားလမျးကူးပီးပွေးတာမွငျလိုကျတယျ…
ဘုရားလမျးကနယျခံတေ အားလုံးသိထားပီးသားပါ အဲ့မိနျးမက ရူးခငျြယောငျဆောငျတယျဆိုတာ.. အားလုံးက မသိခငျြယောငျဆောငျ လှတျထားပေးလို့ခုလို အတငျ့ရဲလာတာပါ..
ဆေးကဒျခှံတကေိုငျပီး ဆေးဖိုးတောငျးပါတယျ ဖိနပျပွတျပွပီးပိုကျဆံတောငျးပါတယျ မပေးရငျ ကြိနျဆဲပါတယျ…ကိုယျတှပေ့ါနျော…
အရူးမက ပိုကျဆံရှိပါတယျ တိုကျခနျးပိုငျတယျလို့လဲ ပွောကွပါတယျ.. သခြောတာက ငှတေိုးခြေးစားပါတယျ…နောကျလမျးထဲက ကုနျစုံဆိုငျတို့ ကှမျးယာဆိုငျတို့က သူနဲ့ မကငျးဘူးလို့ ကွားရပါတယျ….
နောကျနောငျ အဲ့မိနျးမတှရေ့ငျ ဆငျခွငျနိုငျအောငျ ဒီ post ကိုတငျပါတယျ.. အားလုံးကို သတိထားစခေငျြပါတယျ… အခြောငျသမားတကေို ပိုကျဆံမပေးဖို့လဲ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ….